Maalgashiga saamiyada saliida ee CBD oo xiiso leh? 8 Kaydka Xashiishka Ee Ugu Caansan Kuwaas Oo Iminka Soo Kordhaya. • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Maalgashiga kaydka saliida ee CBD ayaa xiiso leh? 8 ayaa ah kuwa ugu caansan ee xashiishka ah ee xashiishadda hadda taagan.
Saamiyada & DhaqaalahacannabisCBDSharci dejinta & Sharci dejinta
Maalgashiga kaydka saliida ee CBD ayaa xiiso leh? 8 ayaa ah kuwa ugu caansan ee xashiishka ah ee xashiishadda hadda taagan.
albaabka daroogada June 21 2019
maqaal by daroogada June 21 2019
Ka hor inta aynaan u gelin doodaha ku saabsan maalgashiga CBD (ama cannabidiol) kaydka saliidda, waxaa laga yaabaa inay waxtar leedahay in marka hore la eego faa'iidooyinka caafimaad ee suurtagalka ah ee saliidan CBD. Tani waxay u ogolaan doontaa saamilayda inay si fiican u fahmaan sababta ay qaar badani ugu dhiiranayaan maalgashigan.
1 Maxay tahay maalgelinta kaydka saliida ee CBD xiiso leh?
2 Maxay yihiin qaar ka mid ah kaydka saliida ee hormuudka ka ah CBD inay isha ku hayaan sannadka 2019?
2.1 1. Terra Tech Corp (OTCMKTS: TRTC)
2.2 2. Dhalooyinka Kush (OTCMKTS: KSHB)
2.3 3. 1933 Industries Inc. (TGIF: CNX)
2.4 4. Daawooyinka GW (NASDAQ: GWPH)
2.5 5. Aurora Cannabis Inc. (TSE: ACB)
2.6 6. Isodoy Inc. (CSE: ISOL)
2.7 7. Kobcinta Koritaanka Korida (WAXAAD: WEED)
2.8 8. Golden Leaf Holdings Ltd. (CNSX: GLH)
3 Waa maxay fursadaha iyo caqabadaha markaad maalgalinayso CBD?
3.1 1. Isbedelada nafaqada
3.2 2. Sharciyeynta cannabis
3.3 3. FDA iyo aragtida DEA ee Maraykanka
Daraasado dhowr ah ayaa tusay in saliidda CBD:
Wuxuu yareynayaa halista ah inuu ku dhaco cudurka macaanka
Waxay ka caawisaa la dagaallanka kansarka
Wuxuu gargaaraa xanuunka xanuun joojiyaha joogtada ah
Tusaale ahaan, la dagaallanka kansarka, CBD waxay bixisaa saameyn anti-buro ah oo dhiirrigelisa dhimashada unugyada burooyinka ee leukemia iyo kansarka mindhicirka. Daraasad kale ayaa muujisay in phytocannabinoidkani uu gacan ka geysan karo joojinta faafitaanka unugyada kansarka marka la eego, tusaale ahaan, kansarka xubinta taranka dumarka.
Waxa kale oo ay leedahay hanti-celin-celin-celin, kaas oo lagu taageeray daraasad aan toos ahayn, daraasad-xakameyn xakameyn ah. Daraasadu waxay muujisay in CBD ay leedahay saameyn ka hortagis ah epileptic ee dadka qaangaarka ah ee leh Dravet syndrome.
Xaaladani waa nooc suuxdin ah oo bukaanku la kulmo gariir ay sababto qandho. Bukaannada lagu daaweeyay CBD waxay leeyihiin hoos u dhac dhexdhexaad ah oo ku dhaca suuxdinta 38,9%.
Waxay sidoo kale u noqon kartaa daaweyn dheeraad ah oo loogu talagalay cudurka Crohn, oo ah cudur calool xanuun leh oo saameeya marinka caloosha. Daraasad laga sameeyay Israa’iil ayaa lagu ogaaday in kuwa qaatay muddo labo bilood ah ay la kulmeen astaamo yari iyo nolol wanaagsan.
Saliida CBD ama saliida hemp waa mid gaar ah maxaa yeelay waa mid aan nafsi ahayn. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan laheyn saameyn la mid ah isticmaalka xashiishka, markaa ma dareemi doontid "sare".
Maxay tahay maalgelinta kaydka saliida ee CBD xiiso leh?
Su'aasha ugu weyn ee maal-galiye laga yaabo inuu haysto kahor inta uusan soo galin ganacsiga marijuana waxay tahay ma ammaanbaa inuu iibsado keydka xashiishka. In kasta oo aysan jirin waddo lagu damaanad qaado sida keyd gaar ahi u fulin doono sida caadiga ah, maalgashadayaashu wali waxay isticmaali karaan farsamooyin wax ku ool ah si ay u falanqeeyaan dhaqdhaqaaqa suuqa ka imaan kara.
Baahida caafimaad ee saliidaha CBD dhinac, koritaanka suuqa saamiyada wuxuu kordhin karaa 2020% ilaa 700, iyadoo leh isku darka heerka kobaca sanadlaha (CAGR) ee 11%. Xitaa ka sii cajiibsan ayaa ah xaqiiqda ah inay dhaafi karto $ 2021 bilyan sanadka 3.
Intaa waxaa dheer, marka la eego tirada dadka isticmaala marijuana ee u wareegaya CBD, waxaa laga yaabaa in ay suurta gal tahay in la gaaro tirooyinkan hore. Maaddaama dowladaha Maraykanku ay bilaabaan in ay sharciyan dejiyaan isticmaalka cannabis, dalabka dalagga ayaa sii kordhaya.
Ururka Hemp Business Business, oo ah urur cilmi baaris ah oo kakooban, ayaa xaqiijiyay tan markii kooxdayada cilmi-baarista suuqyada ay falanqeeyay isbeddellada warshadaha marijuana.
Intaa waxaa dheer, shirkado badan oo waawayn ayaa ku guuleystay guusha weyn ee ay ku yeesheen maalgashiyada xashiishadda cannabis. Tani waa calaamad wanaagsan oo lagu maalgelinayo kaydka saliida ee saliida ee CBD waxay noqon kartaa mid tijaabo ah.
Maxay yihiin qaar ka mid ah kaydka saliida ee hormuudka ka ah CBD inay isha ku hayaan sannadka 2019?
Ka dib markii uu barto faa'iidooyinka maalgashiga kaydka saliida ee CBD, waa waqtigii lagu ogaan lahaa shirkadaha CBD inay mudan yihiin waqtiga iyo lacagta. Saameynahan kambaniga ah ee cannabis ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo qiimo leh oo tixgelinaya miisaaniyadda maalgashadayaasha.
Waa shirkad tafaariiqda xashiishka ah oo "rajo ka qabta" inay ka taliso suuqa California ee xashiishka. Laga soo bilaabo Abriil 2018, suuqyadooda suuqyadoodu waa $ 11 milyan iyaga oo ka dhigaya mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee la daawado.
Saddexda rubuc ee 2018, saamileyda shirkadu waxay lahaayeen sicir ku dhawaad ​​$ 93,1 million. Tani waxay ka dhigan koror ah oo ku dhow $ 16,3 million marka loo eego sinaanta ee quarter ee la soo dhaafay 2017, taas oo ay ahayd oo keliya $ 76,8 million.
2. Dhalooyinka Kush (OTCMKTS: KSHB)
Sida Terra Tech Corp, Dhalooyinka Kush sidoo kale waa shirkad fadhigeedu yahay California. Markii hore waxay bilaabeen inay noqdaan shirkad wax soo daabacda oo isla markiiba u weecatay dhinaca xashiishadda.
Marka la barbardhigo A ee sinaanta ee August 31 2017 ($ 40,9 million) si ay 31 May 2018 ($ 72,3 million) ayaa muujiyey koror weyn ee ka badan $ 30 million.
1933 Industries Inc., oo horey loo yiqiin Jimcihii Jimcihii, ayaa leh tiro badan oo ah alaabooyinka caafimaadka cannabis ee dad badan oo iibsanaya ujeedooyin caafimaad.
Xogta waxay sidoo kale muujineysaa guusha shirkadda:
Kordhinta dhirirka - Muddadii saddexda bilood ahayd ee dhammaatay Julaay 31, 2018, shirkaddu waxay la kulantay koror dakhli dhan 18% oo ahaa $ 3,3 milyan CAD illaa $ 3,9 milyan CAD.
Sinnaanta - Waxay sidoo kale ku riyaaqeen koror ku yimid sinnaanta sanadka 2018. Bishii Luulyo, waxay haysteen $ 36,9 milyan oo CAD, taasoo u kordhay $ 41,4 CAD bishii Oktoobar.
4. Daawooyinka GW (NASDAQ: GWPH)
Mid ka mid ah horjoogayaasha ka jira warshadaha CBD iyo marijuana waa GW Pharmaceuticals. Waxay yihiin shirkad dawo oo British ah oo si fiican loo yaqaan Nabiximols, daroogada ugu horreysa ee laga soo saaro warshad cannabis ah oo loogu talagalay sclerosis badan si ay u hesho oggolaansho suuqa ee dal kasta.
Waxay ka bilaabantay 1998 sidii shirkad dadweyne oo kooban. Maanta waxay leedahay hanti dawladeed oo ku taala Ammaanka Mareykanka iyo Nasdaq Global Market.
Xogta ayaa muujisay in rubacii ugu dambeeyay ee 2018, oo dhammaaday 31-kii Diseembar, ay shirkaddu leedahay saami dhan $ 674,08 milyan. Tani waxay shaaca ka qaaday koror weyn oo ka yimid rubacii hore ee isla sanadkaas oo ku eg 30 Sebtember, oo keenay "kaliya" $ 415,16 milyan.
Shirkadani waa shirkad Cannabis ah oo leh shatiga. Waxay leedahay dalab guud oo ku saabsan shirkadda Toronto Stock Exchange sida ACB.
Laga bilaabo laga bilaabo 2018, waxay leedahay shan shatiyadood oo iib ah iyo siddeed xarumo wax soosaaraya oo ku yaala wadamada 18 ee adduunka kuyaala. 2017, waxay soo saartay qiyaastii $ 13,5 ee dakhliga.
Sinnaanta rubucgii ugu dambeeyay ee 2018 waxay ahayd CAD $ 4,22, hoos u dhac marka la barbardhigo rubacii hore ee isla sanadkaas, taas oo ay ka dhigan tahay CAD $ 4,4.
Iyada oo waxtarkeeda cajiibka ah, ma aha wax la yaab leh in falanqeeyayaasha badani leeyihiin maalgashadayaasha oo raadinaya Aurora Cannabis Inc. sanadkan.
6. Isodoy Inc. (CSE: ISOL)
Isodiol Inc. waxaa loo yaqaan adduunka oo dhan inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu weyn ee bixiya hemp warshadaha iyo alaabada CBD waxayna sii wadaa inay kor u qaaddo wacyiga faa'iidooyinka caafimaad ee alaabada laga soo saaray xashiishadda. Hadafkooda shirkad ahaan maahan oo kaliya inay iibiyaan wax soo saarkooda, laakiin waa inay dadka ka wacyi galiyaan isticmaalka marijuana caafimaad.
Shirkaddu waxay la kulantay koror iib ah oo xaddiga 5.276% ah muddo hal sano ah laga bilaabo Maarso 31, 2017 illaa Maarso 31, 2018, laga bilaabo $ 355.959 illaa $ 19 milyan oo doollarka Mareykanka ah.
7. Kobcinta Koritaanka Korida (WAXAAD: WEED)
Hore ee Tweed Marijuana Inc. shirkadu waxay hirgelisay magaca Canopy Growth Corporation ee 2015. Nooc Tweed ah ayaa si dhaqso leh u koreysa aduunka oo dhan.
Xaqiiqdii, The Motley Fool ayaa ugu yeeray mid ka mid ah keydka marijuana ugu fiican si uu u daawado soo socda 2019. Ganacsiga iyo jaangooyadu waxay ku siinayaan bilawga bilawga tartamayaasha tartanka suuqa.
Saameyntooda, waxay lahaayeen CAD $ 7,2 bilihii rubuckii ugu dambeeyay ee 2018, taas oo ahayd mid kor u kacay saddexdii bilood ee hore ee isla sanadkaas, gaarey $ 1,15, CAD $ 1,13, CAD $ 1,6, siday u kala horreeyaan.
8. Shirkadda Dahabka Leaf Holdings Ltd. (CNSX: GLH)
Shirkadan saldhigeedu yahay Portland waxay hadda tahay mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu weyn ee saliidda CBD ee Waqooyiga Ameerika. Waxay kufaansan yihiin inay noqdaan kuwo ku salaysan odhaaho oo diirada saaraya baahida macaamiishooda.
Q3 2018, shirkaddu waxay soo sheegtey iibinta $ 5.1. milyan, korodhka 63% marka la barbar dhigo $ 3,1 ee rubuca saddexaad ee 2017.
Ogow: Kuwani waa qaar ka mid ah kaydka saliidda CBD ee ugu fiican si ay u maal gashadaan Qarsoodi ah. Inaad xor u tahay inaad ogaato shirkadaha kale ee CBD oo aad ka heli karto xittaa aad u qibrad badan.
Waa maxay fursadaha iyo caqabadaha markaad maalgalinayso CBD?
Maalgashadayaashu waxay go'aan ka gaari karaan marka ay timaaddo maalgashiga kuxiga ama saamiyada CBD haddii ay leeyihiin aqoon badan oo ku saabsan aragtida qaybta. Sababtoo ah way fiicantahay in la eego fursadaha iyo caqabadaha.
1. Isbedelada nafaqada
Kala-tagga CBD wuxuu ka baxsan yahay bakhaarada. Maanta, kalluumeyaal horeba waxay u tixgeliyaan mid ka mid ah isbeddellada ugu sarreeya ee loogu talagalay 2019, sida laga soo xigtay baadhitaan ay sameeyeen Ururka Cuntada Qaranka.
Bakhaariyeyaashu waxay ku darsadaan raashinka saliida, ma aha oo kaliya in ay kor u qaadaan dhadhanka, laakiin sidoo kale siinta baahida macaamiisha.
Suuqa cabitaanka xashiishadda lagu kariyo ayaa kori kara in ka badan 2024 bilyan oo doollar sannadka 1, waana 15 jeer qiimaheeda sannadka 2018. Shirkadaha sida Nolosha Dunida iyo Kobcinta Canopy waxay u badan tahay inay hoggaamiyaan jidka.
Hase yeeshee, xeerku waa caqabad. Tusaale ahaan, New York, tusaale ahaan, waxay ku mashquulsan tahay shuruucda ku saabsan isticmaalka waxyaabaha sida cannabis ah, gaar ahaan cuntada.
2. Sharciyeynta cannabis
Bakteeriyada Marijuana waxay yeelan karaan sababo badan oo lagu farxo. Dowlado badan ayaa qorsheynaya in ay sharciyeynayaan iibinta alaabooyinkaas xataa xitaa isticmaalka madadaalada.
Illinois ayaa dhowaan soo saartay biil u oggolaanaya bixiyaasha caafimaadka iyo farmasiyada inay iibiyaan weedha madadaalada. Waxay sidoo kale u oggolaanayaan inay furaan meel labaad, waxay u badan tahay inay labadooda midba midka kale laban laabaan sanadka soo socda.
In Mexico mawduuca isticmaalka cannabis, iibka iyo wax soo saarka ayaa weli muran. Marijuana caafimaad ama cannabis waa sharci, halka noocyada madadaalada ee aan la joogin.
Si kastaba ha noqotee, dadka ka fikiraya inay maalgeliyaan CBD iyo weedka waddanka waxay kari karaan sharciga kiiska. Tan iyo 2015, Maxkamadda Sare waxay horay u xukuntay in xashiishadda cannabis ee madadaalada ah ay tahay mid dastuuri ah.
Tani macnaheedu ma aha in alaabta loo isticmaalo madadaalada inay yihiin sharci, laakiin waxay u tegi karaan maxkamada dhexe si ay u caawiso.
3. FDA iyo aragtida DEA ee Maraykanka
Si ka duwan marijuana, alaabada CBD waa sharci marka loo eego sharciga Beerta Beeraha, kaas oo dib uga diiwaangeliyey hemp walaxda la kontoroolo. Sidoo kale, maalgashiga saamiyada CBD iyo xitaa ETF-yada Mareykanka waa sharci.
Si kastaba ha noqotee, warshadaha xarkaha ayaa raadinaya dagaal adag oo ay la gasho Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA). Waxay sii wadi doontaa inay awood u yeelato awoodda ku saabsan xeerka CBD ama alaabada ku salaysan.
Marka loo eego tan FDA ee Ameerika, CBD wali waa qayb ka mid ah daroogada, sidaa darteed alaabada ay ku jirto waa inay wali maraan nidaamka oggolaanshaha. Si kastaba ha noqotee, ogow in FDA ay horey u ansixisay dawo ay ku jirto CBD oo loo yaqaan 'Epidiolex', taas oo loogu talagalay suuxdinta.
Ilaa hadda, labada xero, iibiyeyaasha iyo FDA, waxay qabtaan dhegeysiyada. Kuwa iibiya alaabada noocaas ah waxay rajeynayaan in hay'adda FDA ee Mareykanka inay dejiso nidaamka.
Dhanka kale, Hay'adda Dhaqangelinta Maandooriyaha (DEA) waxay soo saartay dawooyinka xashiishadda laga keeno ee FDA-ansixisay oo ay ku jiraan wax ka yar 0,1% THC sida Jadwalka 5. Tani waxay la macno tahay inay sharci yihiin ilaa inta isticmaalku ku saleysan yahay warqad dhakhtar.
Maalgashiga kaydka saliida ee CBD ayaa hubaal ah xeelad ah in la qiimeeyo haddii aad raadineyso inaad ku darto sanduuqa maalgashigaaga. Suuqa ayaa kordhay sababtoo ah shuruudo caafimaad oo xoog leh iyada oo shirkado yar oo firfircooni ka shaqeeya illaa iyo hadda.
Waxaa laga yaabaa waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid sida maalgashi marijuana ah oo macquul ah waa inaad marka hore sameysid cilmi baaris macquul ah ka dibna had iyo jeer maalgashi indhahaaga fur. Sida nooc kasta oo kale oo kayd ah, had iyo jeer ku falanqee warshadaha maskax furan si aad si wax ku ool ah u saadaaliso isbeddelada suuqyada mustaqbalka.
Faahfaahin dheeraad ah ka akhri Herostocks (EN, ilaha)
saamiyadaAmericamaalgelintamaaliyad ahaanxagashasharci ahaansharci-dejintadaawada cawskaTHCMaraykankaAdduunka oo dhansaliida cannabis
Waa maxay Cannabinol (CBN) iyo halka laga isticmaalo
Sideed uga faa'iidaysan kartaa caafimaad ahaan...